Android | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Xperia Z နဲ့ ZL တို့ကို version 5.1.1 မှာ Root လုပ်ကြမယ်။
Sony Xperia Z နဲ့ ZL တို့ကို version 5.1.1 မှာ Root လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး ဖုန်းကို Bootloader unlock လုပ်ရ ပါမယ်။ Bootloader unlock လုပ်ရန်
အောက်က လင့်လေးကို ၀င်ရောက်ပြီး Bootloader unlock code တောင်းလိုက်ပါ။
Bootloader unlock လုပ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖုန်းတဲက data တွေ အကုန် ပျက်ပါမယ်။ အရေးကြီးတဲ့ data တွေကို back-up လုပ် ထားပေးပါ။
Sony Bootloader unlock code တောင်းရန်
Bootloader unlock code ရပြီဆိုရင်တော့ လိုအပ် တာလေးတွေကို အောက်မှာအရင် Download ရယူ လိုက်ပါ။
Sony Driver မရှိပါက Sony Driver download ရယူရန်
Adb Folder Download ရယူရန်
TWRP recovery Download ရယူရန် - For Xperia Z1 & For Xperia ZL
SuperSU-update.zip Download ရယူရန်
လိုအပ်တာလေးတွေ Download ရယူပြီးရင်တော့ လုပ်ငန်းလေး စလို့ရပါပြီ။
အရင်ဆုံး Download ယူ ထားတဲ့ Adb Folder ထဲကို TWRP recovery boot.img ကို ထည့်လိုက်ပါ။
Folder ထဲက အလွတ် တနေ ရာရာကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Shift + Right Click ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
box တစ်ခု ပေါ်လာပါမယ်။
Open command window here ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Command box ပေါ်လာ ရင်တော့ ဖုန်းကို connect လုပ်ပေး ရပါမယ်။
ဖုန်းကို power အရင် ပိတ်လိုက်ပါ။
volume up ကို ဖိထားပြီး computer နဲ့ ချိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ အပြာရောင် မီးလေးလင်း လာပါမယ်။
ဒါဆိုရင် command box ကနေဖုန်းကို သိ / မသိ စစ်ဆေးနိုင်ရန် အောက်က စာတန်းလေးကို copy ရယူပြီး command box လေးထဲ paste လုပ်ပြီး enter ခေါက် ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းကို command box က သိပြီဆိုရင် ဆက်လက်ပြီး အလုပ် လုပ်ကြပါမယ်။ bootloader unlock လုပ်ရန် အောက်က စာတန်းလေးကို copy ရယူပြီး command box မှာ paste အရင် လုပ်လိုက်ပါ။
အဲဒီ စာတန်းလေး နောက်ကနေပြီး Bootloader unlock code လေးကို ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်ပေး လိုက်ပါ။
နဲနဲလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါ။ Finish တို့ဘာတို့ ပြပြီ ဆိုရင်တော့ Bootloader unlock လုပ်ခြင်း ပြီးစီးပါပြီ။
နောက်တစ်ဆင့် မှာတော့ Folder ထဲထည့်ထားတဲ့ TWRP recovery boot.img ကို flash ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်က စာတန်းလေး အတိုင်း command box မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ။
TWRP recovery ကိုပါ flash ခြင်း ပြီးဆုံးပြီ ဆိုရင်တော့ command box မှာ fastboot reboot လို့ရိုက်ထည့်ပြီး enter ခေါက် လိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ reboot ကျပြီး power ပြန်တက် လာပါလိမ့်မယ်။ ( နဲနဲကြာ ပါမယ် ခဏ စောင့်ပေး လိုက်ပါ။ )
power ပြန်တက် လာပြီး home screen ကို ပြန်ရောက်ပြီ ဆိုရင်တော့ USBdebugging တို့ Unknow Source တို့ကို on ပေးလိုက်ပါ။
Download ရယူ ထားတဲ့ SuperSU-update.zip လေးကို Sdcard ထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ။
ဖုန်းကို power ပြန်ပိတ်ပေး လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ SuperSU-update.zip ကို install လုပ်ပေး ရပါမယ်။
ဖုန်းကို Recovery mode သွင်းရ ပါမယ်။ Power key ကို ဖိထား လိုက်ပါ။
Vibrate တစ်ချက် တုန်လာရင် volume up key ကို ဖိထား လိုက်ပါ။
Recovery mode ကို ရောက်သွား ပါလ်ိမ့်မယ်။
Install from sd card ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ sd card ထဲ ထည့်ထားတဲ့ SuperSU-update.zip ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်းကနေ Install လုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ်။
Installing success တို့ ဘာတို့ ပြပြီ ဆိုရင်တော့ back key နဲ့ ပြန်ထွက်ပြီး အပေါ်ဆုံးက Reboot system now ဆိုတာလေးကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ Root လုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
ကဏ္ဍ Android, Root, Sony
Honor 4X ( UL00 ) B262 / B362 တို့ကို EMUI 3.0 Stable Update လုပ်နိုင်ရန် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ်။
တောင်းဆိုထား သူများနဲ့ အတူ လိုအပ်နေသူများ အားလုံး အောက်ကလင့် ကနေ Download ရယူ လိုက်ကြ ပါအုံး ခင်ဗျာ။
Device Name: Honor 4X/Glory 4X (Unicom Standard Version)
Build Number: V100R001CHNC00B262
File Name: Che2_EMUI3.0_Android4.4_V100R001CHNC00B262.zip
MD5 Hash: 7B8956D0F8748FE8F63FE4DB6843AB77
▼ Download For B262 ▼
Device: Honor 4X/Glory 4X (Unicom Advance Version)
Build Number: V100R001CHNC00B362
File Name: Che2_EMUI3.0_Android4.4_V100R001CHNC00B362.zip
MD5 Hash: B681C4AC46B0DE8BDF3EEE19C2EEAAB3
▼ Download For B362 ▼
After downloading the appropriate firmware on your PC, extract the “Update.app” file from it.
Connect your phone over USB in mass storage mode and make sure the SD Card is formatted in FAT32 system.
Transfer the Update.app package to the “dload” directory of your SD Card.
Disconnect the USB cable and power off the phone.
Reboot into SD Upgrade Mode by holding Volume Down + Volume Up + Power buttons simultaneously.
Wait for the phone to trigger the upgrade. It’ll takeafew minutes to complete.
Once you get “OK” boot your phone normally and enjoy the update.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 14, 20157comments:
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Honor
ZenFone Series Root Toolkit
Asus Company ထုတ် Zenfone Series တွေကို Root ပြုလုပ်နိုင်မယ့် ToolKit လေးပါ Zenfone 4/5/6 (KITKAT) နဲ့ (Lollipop) သာမက Zenfone2(ZE500CL / ZE550ML / ZE551ML) တွေကို Root ပြုလုပ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
Zip ကို Download လုပ် ဖြည်ချပြီး Root ဆိုတဲ့ bat လေးကို Double Click ပေးလိုက်ရင် Root Process စတင်ပြီး Reboot ကျပြီး ပြန်တက် လာရင်တော့ သင့်ဖုန်းမှာ Root Access ရရှိ နေပါပြီ။
Already Test with Zenfone2ZE550ML !
▼ Download Zenfone Root Toolkit Here ! ▼
Refer – Zenfone Blogspot
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 13, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Android, Asus, Root
Lollipop Firmware For Samsung Galaxy S4 v 5.0.1
Samsung Galaxy S4 ကို Lollipop Firmware တင်ချင်လို့ တောင်းထားတဲ့ အကိုတွေ အတွက် version 5.0.1 Lollipop Firmware လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ Download ရယူနိုင်စေရန် Dev-Host.com link လေးနဲ့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး လိုအပ်တာလေးကို Download ရယူ လိုက်ပါ။
Lollipop Firmware - GT-I9500
Lollipop Firmware - GT-I9505
Lollipop Firmware - GT-I9506
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Odin ကို အရင်ဖွင့် လိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ Download mode ၀င်ပြီဆိုရင်တော့ computer နဲ့ ချိတ်ဆက် ပေးလိုက်ပါ။
Odin မှာ ဖုန်းကို သိပြီ ဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေး နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။ Odin မှာ PASS ပြပြီး
ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွား ပါလိမ့်မယ်။
ပါဝါ ပြန်တက် လာပြီ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ Lollipop Firmware တင်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 07, 20153comments:
Lollipop Firmware For Sony Xperia Z3+ E6553
အီးမေးမှ တောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်း အတွက် Sony Xperia Z3+ ကို Lollipop version လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
တခြား အသုံးပြု ချင်သူတွေ လည်း version 5.0.2 လေးကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ်။
လိုအပ်နေသူများ အားလုံး Download ရယူ လိုက်ပါ။
▼ Lollipop Firmware for Sony Xperia Z3+ E6553 ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, September 05, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Firmware, Sony
Samsung Galaxy A7 အတွက် Lollipop Firmware 5.0.2
Samsung Galaxy A7 ကို Lollipop Firmware တင်ချင်လို့ တောင်းဆို ထားတဲ့ အကိုတို့ အတွက် SM-A700FD နဲ့ SM-A700F model နှစ်မျိုး အတွက် Lollipop Firmware လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
Download ပြုလုပ် ရတာ လွယ်ကူ အဆင်ပြေအောင် Dev-Host.com link လေးနဲ့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
လိုအပ်သူများ အောက်က လင့်လေးမှာ Download ရယူ လိုက်ကြပါ။
Firmware တင်နည်း လေးကတော့ အောက်က နည်းလေး အတိုင်း ပြုလုပ်နိုင် ပါတယ်။ ( မသိသေးသူများ အတွက်ပါ။ )
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Odin ကို အရင်ဖွင့် လိုက်ပါ။ Odin က PDA ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Firmware ဖိုင်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
Odin မှာ ဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေးနှိပ် ပေးလိုက်ပါ။
ပါဝါ ပြန်တက်လာပြီ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ Lollipop version လေးကို တွေ့မြင်ရပါပြီ။
Sony Xperia Z2 D6502 နဲ့ D6503 တို့ အတွက် Lollipop 5.1.1 Firmware
Sony Xperia Z2 ကို Lollipop 5.1.1 တင်ချင်လို့ မေးထားတဲ့ အကို အတွက် အလွယ်တကူ Download ရယူနိုင်ရန် Lollipop 5.1.1 Firmware လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
တောင်းထားတဲ့ အကိုနဲ့ အတူ လိုအပ်သူ များလဲ ရယူလိုက်ပါ။ Dev-Host လင့်လေးနဲ့ တင်ပေး ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် Resume အတွက်လည်း စိတ်မပူ ရပါဘူး။
အောက်ကလင့်တွေ ကနေ ရယူလိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
▼ version 5.1.1 For Xperia Z2 D6502 ▼ OR ▼ version 5.1.1 For Xperia Z2 D6503 ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, September 04, 20153comments:
Samsung Galaxy Note3( Sm-N900 ) ကို version 5.0 မှာ Custom recovery သွင်းချင်လို့ တောင်းဆို ထားတဲ့ အကို အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး လိုအပ် တာကို အောက်ကလင့်မှာ Download ရယူ လိုက်ပါ။
▼ Custom recovery ကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူပါ ▼
Odin က PDA ဆိုတဲ့ နေရာမှာ n900-cwm-recovery-6.0.5.0-kk_L5.0(0812).tar ဖိုင်ကို ထည့်လိုက်ပါ။
Odin မှာ ဖုန်းကို သိပြီ ဆိုရင် Odin က Start ဆိုတာလေး နှိပ်ပေး လိုက်ပါ။
Odin မှာ PASS ပြပြီး ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
ပါဝါ ပြန်တက် လာပြီ ဆိုရင်တော့ recovery mode သွင်းခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, September 01, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Recover, ဖုန်းနည်းပညာ